Ma lala baxay xogtaada gaarka ah ee internet-ka? – XOGMAAL.COM
Ma lala baxay xogtaada gaarka ah ee internet-ka?
Bishii la soo dhaafay, 145 milyan oo qof oo Mareykan ah ayaa ogaaday in sirtooda loo dhacay. wuxuu ahaa weerarkii ugu waynaa ee taariikhda akhbaarta internet-ka.
Dadka akhbaartooda ayaa la xaday ka dib markii barta bixisa kaararka wax lagu iibsado ee Equifax loo dhcay.
Xubnaha laanta amniga bulshada, warqadaha dhalashada, telefoonada, iyo shatiga gawaarida iyo kaararka lagu adeegto ayaa la faafiyay, taas oo dad badan ka dhigtay in si fudud lagu dhaco.
Shirkado badan waxay aqoon ballaaran u yeesheen dadka qaar oo aysan horey u aqoon. Isbuuc kastana waxaa la maqlaa in burcad ay jabsatay baro internet.
Hadaba, taa ma waxay tahay in xilligan aysan jirin sir qof u gaar ah?
BBC ayaa baaritaan ku sameysay arrintaa.
Burburinta meesha ay xogta ku keydsan tahay
“Teknolojiyadda wanaag badan ayay inoo leedahay, balse ma jirto sabab kalsoonidaa ay uga baxsanayso in sirteena la iib geeyo,” ayuu yiri Ben Wizner, oo ka tirsan ururka madaxbannaanida shacabka Mareykanka.
Wuxuu sidoo kale lataliye sare oo dhanka sharciga u yahay ninka faafiya sirta sirdoonka Mareykanka ee Edward Snowdon.
Mr Wizner wuxuu tilmaamay in dadka looga baahan yahay in ay ilaalin karaan sirtooda, sidoo kale ay xakameyn karaan cidda ay la wadaagayaan.
“Waxaa suuragal ah in hadda teknoloji ahaan ama dhaqaale ahaan ay dowladda qaadan karto sirteena ayna keydsan karto wax kastoo aan sameyneyno. Waa arrin aan horey u dhici jirin,” ayuu yiri.
Dhammaan xogta, midda ku jirto website, ama mobile ama baraha bulshada, waxay abuurtay in sirta dadka oo aad u ballaaran ay hayaan shirkado wada shaqeeya.
“TV-ga ayaad iska daawaneysaa, balse telefishinka adiga ayuu ku daawanayaa.”
Wuxuu sidoo kale walaac ka qabaa heshiisyada laga damacsan yahay in lagu ilaaliyo akhbaarta dad waynaha.
“Sida iska cad, suuragal ma aha in qofkstaa uu aqriyo waxa ay yihiin heshiisyada lagu waydiinayo. Waan ognahay dhammaanteen waxaan ku dhufanaa “aqbal”. taas waxay u dhigantaa in sirtaada aad qof kale ku aamintay”
“Qofkastoo inaga mid ah xogtiisa waala burburiyay.”
Mastaqbal aan lahayn xog badan
“Waa arrin wanaagsan wixii dhacayay sanadkii tagay ama ka hor,” ayuu yiri Gus Hosein, madaxa sirta caalamiga ah. Waa hay’ad aan dowli ahayn oo u ololeysa in dadku yeeshaan wax u gaar ah.
“Arrinta niyad jabka leh waa midda inaga qarsoon, waxa aynaan arki karin. Shirkadaha qaar waxay laba jibbaareen heerka ay la egtahay xogta ay qaadaan, waxay doonaan ayayna ku sameeyaan, adigana waxba kama ogid,” ayuu yiri.
Laakiin wuxuu aaminsan yahay in shaqsi kastaa uu ku guuleysan karo in uu online-ka ka ilaaliyo waxa u gaarka ah.
“Inta badan tallaabada wanaagsan ee Facebook ama Google iyo shirkado kale, waa mid ku timi cadaadis badan.”
Inta badan shirkadaha teknolojiyadda waxay ku yaallaan Mareykanka, Ururo ayaana ka hortaga in xeerar adag lagu soo rogo, sida uu sheegay.
“Waxaan ka walwalsanahay in xogteena la iska uruursado, sababtoo ah amni ma jiro, dembiile kaste ayaa heli karo, hadduu u baahdo.’
“Ilaalinta xogta gaarka ah waa badbaadada aasaasiga ah ee mustaqbalka,” ayuu yiri.
Soomaaliya oo ka mid ah 27 dowladood oo Diinta Islaamku ay u tahay Diin rasmi ah
Madaxda Maamul Goboleedyada dalka oo maanta isugu yimid Kismaayo